अन्तराष्ट्रिय Archives - Page2of 103 - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
जापानको,कावासाकीमा चक्कु प्रहारबाट ८ साना बालबालिका सहित १६ जना मानिसहरु घाईते
टोकियो । मंगलबार बिहान, जापानको कावासाकीमा चक्कु प्रहारबाट १६ जना मानिसहरु घाईते भएका छन् । जसमा ८ जना प्राथमिक विद्यालय तहका बालबालिकाहरु रहेका छन् । जापानी प्रसार संस्था एनएचकेका अनुसार, कानागावा प्रिफेक्चरको, कावासाकी स्थित, नोबोरितो स्टेशनमा सो घटना घटेको हो । साथै उक्त घटनास्थलमा एक शंकाष्पद मानिसलाई नियन्त्रणमा लिईएको जनाईको छ । ४० देखि ५० वर्ष उमेर समुहका जस्ता देखिने ति...
भ्यालेन्सिया कोपा डेल रे च्याम्पियन, बार्सिलोना हार्यो
एजेन्सी – भ्यालेन्सिया स्पेनिस कोपा डेल रेको च्याम्पियन बनेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोनालाई पराजित गर्दै बार्सिलोनालाई २–१ ले स्तब्ध बनाउदै भ्यालेन्सिया कोपा डेल रे च्याम्पियन बनेको हो । सेभियामा भएको खेलमा बार्सिलोनालाई स्तब्ध बनाउन केभिन गेमेरियो र रोड्रिगोले गोल गरे । बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले गोल गरेपनि हार टार्न सकेन । २१औं मिनेटमा केभिन गेमेरियाको गोलबाट...
बिभिन्न समय समयमा कोरियामा कार्यरत विदेशी मजदुरहरुलाई लक्षित गरी बिभिन्न कार्यक्रम तथा तालिम सन्चालन गर्दै आईरहेको छनान बैदेशिक सहायता केन्द्रले यहि आउदो मे २६ तारिख आईतबारका दिन “नवौँ छनान वैदेशिक महोत्सब” को आयोजना गर्ने भएको छ । कोरियामा कार्यरत बिभिन्न देशको आ-आफ्नो मौलिक कला,सँस्कृती,पोशाक तथा खानाका परिकारहरु एक देशले अर्को देशलाई चिनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न लागीएको वैदेशिक महोत्सबमा उपस्थितिको...
टोकियो । एक ४० वर्षिय मानिसलाई आक्रमण गरी १३ हजार येन लुटेको आरोपमा ९ जना किशोरहरु पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार, उनिहरुले गत जनवरी २० तारिख बिहान, टोकियोको मिनामी नारुसे, माचिदा मा पैदल हिडिरहेका ४० वर्षिय मानिसलाई आक्रमण गरी, त्यी मानिसको झोलामा रहेको सो रकम लुटेका हुन् । सान्केई सिन्बुन( जापानी एक दैनिक पत्रिका) मा प्रकाशित समाचारका आधारमा प्रहरीले...
जापानमा, ४० वर्षदेखि बिना लाईसेन्स सवारी चलाउने एक चालक पक्राउ
फुकुओका / जापान । सोमबार जापानको फुकुओकामा,सन १९७८ देखि लाईसेन्स बिनानै सवारी साधन चलाउँदै आएका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । सोमबार, गस्तीमा रहेका प्रहरीहरुले, अस्वभाविक तरिकाले सवारी चलाएको देखेपछि त्यि सवारी चालकको कागजात खोजी गरेका थिए । सोहि क्रममा, युकाता सिगेमाचु नाम गरेका त्यि व्यक्तिले सन १९७८ देखि कानुनत: मान्यता प्राप्त सवारी चालक अनुमती पत्र बिनानै सवारी चलाउँदै आएको...
सायद, एक पटक पुग्नुभयो भने पछुताउनुहुनेछैन – मुमिन भ्याली( हेर्नुहोस् तस्बिर)
टोकियो । तपाईँले ‘मुमिन’ हेर्नुभएको छ ? यदि बच्चावेला या ठूलो भएपछि पनि कहिलै ‘ मुमिन’ नामक कार्टुन हेर्नुभएको थियो भने, तपाईको लागि खुसीको कुरा छ, कि मुमिनका सबै पात्रहरुवाई प्रत्यक्ष भेट्न सक्नुहुनेछ । अनि आफ्नै आँखाले मुमिन उपत्यका हेर्न सक्नुहुनेछ । जापानको साईतामा प्रिफेक्चरमा ‘ मुमिन भ्याली थिम पार्क ‘ बनेको छ । यसै वर्षबाट त्यहाँ सर्वसाधारणका लागि टिकट...
जहाँ परपुरुषसंग यौनसम्पर्क गर्न आफ्नै श्रीमानल् दिन्छन् साथ
इन्डोनेसियामा एउटा अनौठो परम्पराले जरा गाडेको छ । त्यहाँ हरेक वर्ष महिलाहरूले अपरिचित पुरुषसँग यौनसम्पर्क कायम राख्छन् । अझ रोचक कुरा त के छ भने विवाहित महिलाले कुनै अपरिचित पुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्ने क्रममा उनीहरूका श्रीमान्ले समेत सहयोग गर्छन् । यो चलन १६ औं शताब्दीदेखि चलिआएको छ । हामीकहाँ परपुरुषसँगको सम्बन्ध अवैध र घृणित मानिन्छ तर इन्डोनेसियाको पोन नामक पर्वमा महिला तथा पुरुषहरू...
८४ वर्षिय जापानी हजुरबाको लोभलाग्दो सकृयता, यसरी भाईरल बन्यो ( फोटो फिचर)
टोकियो । जिन्दगीमा कहिलै बुढो भईयो, अव के स्टाईल पार्नु, के राम्रो फेसन गर्नु जस्ता नैराश्ताहरु आउने गरेका छन् ? त्यसो हो भने एक पटक जापानीहरुको जिवन शैलिलाई नियाल्नुहोस् जो, ८०/९० वर्षमा पनि युवा अवस्था जस्तै व्यवहार गर्दछन् । आज तपाईलाई, एक ८४ वर्षिय जापानी हजुरबाको केहि कथा केहि तस्बिरहरु देखाउँछु है त । जापानको आकिता प्रिफेक्चरका एक पूर्व शिक्षक...